Khalisa iAlarm 2 kunye neAlarm yeAlarm yangaphandle Siren kunye neSleek yaziswa | Ndisuka mac
Khalisa iAlarm 2 kunye neAlamu yeAlarm yangaphandle Siren kunye neSleek yaziswa
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ndisuka eMac sabona ukusebenza ngokukuko kwee-alamu zeringi, kwelo thuba yayiyimodeli yokuqala ye-alamu kwaye ngoku Iring isandula ukubhengeza ukuba isizukulwana esitsha seRing Alarm siya kufumaneka kwiiveki ezimbalwa.
Ukongeza kwesi sizukulwana sesibini se-alamu yoqoqosho kunye nekhuselekileyo ye-Ring, inkampani iveza i-siren yangaphandle yokuncedisa nayiphi na inkqubo yokhuseleko lweRing. Le siren iyahlengahlengiswa ngokupheleleyo kwaye iyavakala xa iAlarm yaseKhaya yenziwe yasebenza. Njenge-alarm yakhe, Le siren inokulawulwa nge-Ring App kwi-Mac okanye kwi-iOS.
Khalisa i-alamu, khusela ikhaya lakho ngale nkqubo ye-alamu epheleleyo kunye nokulula ukuyifaka
I-siren entsha yongeza uthotho lwezibane ezichonga i-alamu edityanisiweyo kwaye yinxalenye yomsebenzi wezi alarms iyala, Ii-LED ezakhelweyo ezidanyazayo zibomvu xa ialam ishukunyiswa Zitsala umdla kwaye zilumkise ngokufikelela ngaphandle kokuqhawula ialam.
Ikwanaso nesandi kunye nokusebenza kweRing Dusk ukuya eDawn ukukhala kwangaphandle kweRing Alarm kukhanyiswe ngombala omhlophe ebusuku. Isixhobo esigqibeleleyo sokukhusela ikhaya lakho kunye nexabiso elithengekayo ngokujonga uxolo lwengqondo lokuba ukubenezixhobo ezifakiweyo Kule meko i siren iphehlelelwa nge- Ixabiso lama-euro angama-79 kwaye liya kufumaneka ukuthengwa ukusukela nge-31 Matshi.
Isandi sesiBini sesiValo seAlarm
Kwelinye icala, ukufika kwe-alamu kwisizukulwana sayo sesibini kuyaqinisekiswa, ngophuculo oluninzi kwinkqubo yezokhuseleko. Asinakulinda ukuba sibeke izandla zethu kule nkqubo intsha yokhuseleko eyenziwe ngeRingi. I-Alarm entsha yesandi (isizukulwana sesi-2) ingena nakweliphi na ikhaya kwaye yongeza uyilo olutsha, ikhibhodi ephuculweyo kunye nezivamvo.
Ikhithi yesi-5 yesiqwenga sale nguqulelo intsha yeAlarm yesandi yongeza yonke into oyifunayo ukuze ufakelwe ngokulula njenge ingxelo yokuqala. Le alarm intsha ibandakanya:
Ikhibhodi entsha kunye neyilwe ngokutsha
Isivamisi soqhakamshelwano seminyango okanye iifestile
Isixhobo sokujonga intshukumo
Uluhlu olwandisiweyo lwamakhaya amakhulu alunangxaki yokugubungela
Njengoko ubona, esi sizukulwana sesibini sesandi se-alamu sibhetele kancinci kunesokuqala ngokwendlela yoyilo kunye nezinye, kodwa eyona nto intle ngaphandle kwamathandabuzo lixabiso layo kwaye lelo iindleko ezingaphantsi kwenguqulo yangaphambili ye-249 euro. Ukuba ufuna ulwazi oluthe kratya ungabhalisa kuyo Ring.com ukukwazisa xa ikhona. Ifemi ngokwayo iyasiqinisekisa ukuba izakuba yeyokugqibela ku-Epreli 28, 2021.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Khalisa iAlarm 2 kunye neAlamu yeAlarm yangaphandle Siren kunye neSleek yaziswa
I-Apple ibhaqa ngaphezulu kwesigidi seentengiso kwinethiwekhi yezixhobo zomgunyathi
Umphathi wegama eligqithisiweyo leDropbox uya kukhululeka ngo-Epreli